​कृषिसँगै होमस्टे, काउलेपानी बन्यो उत्कृष्ट होमस्टे
कात्तिक । सन् २०११ बाट संचालनमा ल्याईएको लमजुङस्थित काउलेपानीको होमस्टेले ३ वर्षको अवधिमै उत्कृष्टको मान्यता पाएको छ । नेपालभरी संचालनमा रहेका अन्य होमस्टेहरुलाई पछि पार्दै बेशिसहर नगरपालिका भित्र रहेको काउलेपानी होमस्टेले उत्कृष्टताको मान्यता पाएको हो ।
होमस्टेको व्यवस्थापकीय प्रणाली, स्वागत, सत्कारका साथै होमस्टेका लागि चाहिने न्यूनमत पुर्वाधारलाई दृष्टिगत गरी काउलेपानीको होमस्टेलाई गाउँ पर्यटन प्रवद्र्धन मञ्च ९भिटो० ले नेपालकै प्रमुख गन्तब्य घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा अनि होमस्टे संचालकहरुमा खुसी छाएको छ ।
काउलेपानीमा कूल १२ घरमा मात्रै होमस्टे संचालन गरिएको छ । सर्लक्क ढुंगा विच्छइएका गाउँघरका गल्लीहरु, फरक फरक शैलीमा निर्माण गरिएका घरहरु, प्रशस्त मात्रामा रहेको खेतीयोग्य भुमि अनि त्यही उत्पादन हुने लोकल खाद्यपर्दार्थहरुले काउलेपानी पुग्ने जो कसैको मन पनि लोभ्याउने गरेको छ ।
स्थानियबासीन्दाको न्यानो आतिथ्यता अनि गाउँघरमै उत्पादित घरायसी खाद्यवस्तुहरुले काउलेपानी होमस्टेमा आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरुको मन जित्ने गरेको ग्रामिण पर्यटन विकास समिति काउलेपानीका अध्यक्ष एवं जिल्ला पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष देउबहादुर गुरुङले बताए । गुरुङ भन्छन्, “काउलेपानीको होमस्टेलाई उत्कृष्ट घोषणासंगै अब गन्तब्य गाउँशहर काउलेपानी २०१४्१५ को कार्यक्रम संचालन गर्छौ ।”
२०११ को विश्व पर्यटन दिवसको अवसर पारी काउलेपानीमा पहिलोपटक होमस्टेको सुरुवात गरिएको बताउँछन् काउलेपानी होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठ । श्रेष्ठ भन्छन्, “हामीहरुले शुरुको अवस्थामा ९ वटा घरमा मात्रै होमस्टे संचालन गरेका थियौ तर गाउँमा आउने पर्यटकहरुको संख्यामा उत्साहजनक बृद्धि भएपछि होमस्टेको संख्या बढाएर १२ पुयायौं ।”
२०६९ सालमा लमजुङ उद्योग बाणिज्य संघले काउलेपानीलाई “मोडेल चेम्बर भिलेज” को घोषणा गरेपछि काउलेपानी क्षेत्रले थप गति लिएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष भेष बहादुर पौडेलले बताए । यसका साथै काउलेपानीमा पुगेर त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई होमस्टे संचालन गर्नको लागि जेसिस, रोटरी, रोट्रयाक्ट जस्ता क्लवहरुले हौसला प्रदान गरेको होमस्टे संचालकहरुले बताएका छन् ।
के छ त काउले पानी क्षेत्रको विशेषता ?
१ हजार ६ सय मिटर उचाइमा रहेको काउलेपानी क्षेत्र प्रकृतिमा धनी मानिएको मनोरम स्थल हो । यहाँबाट १ सय ८० डिग्रीको विन्दुबाट बुद्ध, मनास्लु, अन्नपूर्ण, लमजुङ लगायत गरी १४ वटा हिमश्रङखलाहरु देख्न सकिन्छ । १५ औं शताब्दीको ऐतिहासिक लमजुङ दरबार, काउलेपानी देवी मन्दिर, कोट, किल्ला, गढी लगायतका इतिहास बोकेका स्थलहरु यहाँका अमुल्य निधि हुन् ।
ऐतिहासिक महत्व बोकेको काउलेपानी क्षेत्रमा गुरुङ, नेवार, भुजेल लगायतका जातजातीको बसोबास छ । काउलेपानीको होमस्टेसंगै स्थानीयवासिन्दाको कला, संस्कार र संस्कृतिले काउलेपानी पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकसित हँदै गएको होमस्टे संचालक जगत गुरुङ बताउँछन् । यहाँबाट सुर्योदयको दृश्यावलोकन, हरियो वनपाखा, विशाल लालीगुराँसको जंगल, नागवेली रुपमा बगेको मस्र्याङ्दी नदी, ३८ प्रकारका जडिबुटी, लोपन्मुख भएका वन्यजन्तुहरु हेर्न सकिन्छ । यसका साथै गाउँघरमा उत्पादन गरिएको कोदोको ढिंडो, रोटी, गाउँमै उत्पादन गरिएको सागको गुन्द्रुक अनि लोकल कुखुराको मासु होमस्टेको अर्को विशेषता बन्ने गरेको छ ।
होमस्टे सुरुवात भएको तीन बर्षको अवधीमा के परिवर्तन भयो त र?
सदरमुकाम बेशिसहरबाट झण्डै ढेढ घण्टाको पैदलयात्रा पछि पुग्न सकिने काउलेपानीमा ३ बर्ष अघि देखि मात्रै होमस्टे संचालनमा ल्याइएको हो । यो बिचमा गाउँघरहरु सफा राख्ने, घरहरुको स्तरबृद्धी गरिएको बताइएको छ । गाउँमा होमस्टे सुरु भएपछि त्यस क्षेत्रको गरिबी घटेको बताउँछन् ग्रामिण पर्यटन विकास समिति काउलेपानीका अध्यक्ष देउबहादुर गुरुङ । उनका अनुसार गाउँमा तीन बर्षको अन्तरालमा पुर्बाधारहरुको विकास भएको पाइन्छ । यसका साथै बेला बेलामा पाएको होमस्टे तालिमले गाउँमा कुनै पाहुना जाँदा घरभित्र लुक्ने गृहणीहरुमा बोल्ने अनि स्वागत सत्कार गर्ने बानीको विकास भएको छ ।
के–के छन् त बर्षभरी पर्यटकलाई लोभ्याउने ठाउँहरु काउलेपानीमा रु
काउलेपानी होमस्टे नेपालकै उत्कृष्ट होमस्टे हो । यहाँ एक बर्षभरीमा जति बेला र जुनसुकै पर्यटकरु आएपनि पर्यटकहरुको मन लोभ्याउने प्रशस्तै रमणिय स्थल अनि मनोरम दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यस क्षेत्रमा असारको महिनामा धान रोपाई, साउनमा कोदो रोपाई, भदौमा नेवाः समुदायको जात्रा, असोजमा रोटेपिङ, कार्तिकमा कटुस, मंसिरमा धानको दाँइ, पुसमा कोदो कुट्ने, माघमा बन तरुल खन्ने, फागुनमा गुराँस टिप्ने, चैत र बैशाखमा काफल र ऐसेलु टिप्ने, र जेठ महिनामा चुत्रो टिप्ने जस्ता दर्जन बढि प्याकेजमा पर्यटकहरुलाई काउलेपानी पठाउन सकिन्छ ।
एकजनाले कति खर्च गर्नुपर्छ त र?
कुनैपनि पर्यटक होमस्टे क्षेत्र काउलेपानीमा प्रवेश गराउनको लागि ग्रामिण पर्यटन विकास समिति काउलेपानी, काउलेपानी होमस्टे व्यवस्थापन समिति र उद्योग बाणिज्य संघ लगायतको सहमतिमा ७ सयको प्याकेज बनाइएको छ । सो प्याकेजमा रहेर समितिले हामेस्टेमा बस्न जाने पर्यटकलाई स्वागत सत्कार, बेलुकीको खाजा, बेलुकी मासुसहितको खाना, विहानको खाजा अनि विदाई गर्ने गर्दछन् । समितिले निर्धारण गरेको ७ सयको प्याकेजभन्दा बढि गर्न चाहेमा पर्यटक आफैले लागेको रकम तिर्नुपर्ने प्राव्धान रहेको छ ।
कसरी जाने काउलेपानी होमस्टे ?
सदरमुकाम वेसीशहरबाट मोटरमा करिव ८ किलोमीटर कच्ची बाटो छिचोल्दै पुगिने काउलेपानी, सामुन्द्रिक सतहदेखि १ हजार ६ सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ । पैदलयात्राबाट पनि होमस्टे क्षेत्र काउलेपानी पुग्न सकिन्छ । त्यहँ पुग्नको लागि सदरमुकाम बेशिसहरबाट झण्डै डेढ घण्टा पैदलयात्रा गर्नु पर्दछ ।
काउलेपानीलाई पर्यटकीय गन्तब्यको रुपमा विकास गर्न स्थानिय शिरखोला आमा समूहको पनि त्यत्तिकै भुमिका रहेको छ । गाउँघरमा आउने पर्यटकहरुलाई आमा समूहकै नेतृत्वमा स्वागत सत्कार गर्ने गरिएको आमा समूहकी अध्यक्ष सन्तमाया गुरुङले बताइन् । काउलेपानीका वासिन्दाबाट लमजुङको ग्रामिण भेगमा होमस्टे र पर्यटन प्रवद्र्धनमा लागेकाहरुले केही सिक्न र सोही अनुरुप लाग्न जरुरी छ ।